Rin'i Ichi chishongo chinonakidza chechisikirwo chimiro. "Doppio", mune yayo inotenderera chimiro, inofamba munzira mbiri inomiririra nguva yevarume: yavo yekare uye yavo ramangwana. Inotakura sirivheri negoridhe izvo zvinomiririra kusimudzira kwesimba remweya wemunhu munhoroondo yayo yepasi.
Mhete Uye Pendant
Chishanu 7 Ndira 2022
Mhete Uye Pendant Iyo yekuunganidza Natural Runako yakagadzirwa semutero kusango reAmazon, nhaka kwete chete kuBrazil, asi kune nyika yese. Iyi yekuunganidza inounza pamwechete runako rwechisikwa pamwe nehupenzi hwechikadzi curves uko iyo zvishongo chimiro uye inosimbisa muviri wemukadzi.
Mutsipa Iyo Muhuro inoshanduka-shanduka uye inogadzirwa kubva kumasidimbu akasiyana kutengeswa mushiputi pamwe chete kusvika pakasarudzika zvakanaka pamutsipa wevakadzi. Iwo maruva maruva kurudyi anotenderera uye kune icho chinobvumidzwa kushandisa kuruboshwe ipfupi pamutsipa parutivi se brooch Iyo mutsipa wakanaka kwazvo unopihwa iyo 3D chimiro uye kuomarara kwechinhu. Kurema kwayo kwese ndeye zviuru makumi mana nezvitatu nemakumi mashanu
Chitatu 5 Ndira 2022
Silk Foulard "Passion" ndechimwe chezvinhu zve "Regards". Chaizvoizvo pukuta silika banga pane imwe homwe kana kuti riise seyekuveza uye riite rinoperera hupenyu hwese. Izvo zvakafanana nemutambo - chinhu chese nechimwe chine zvinopfuura chiitiko chimwe. "Zvese" zvinosanganisira hunyoro hukama pakati pehunyanzvi hwekare nezvinhu zvemazuva ano zvekugadzira zvinhu. Dhizaini yega yega yakasarudzika chikamu chemhizha uye inotaura imwe nyaya. Fungidzira nzvimbo iyo yega diki tsanangudzo inotaurira nyaya, apo mhando kukosha kwehupenyu, uye hukuru hwakanyanya kunaka huri kuita iwe pachako. Apa ndipo "Regards" inosangana newe. Rega hunyanzvi uonane newe uye ugochembera newe!
Chipiri 4 Ndira 2022
Zvishongo Zvekushongedza Project future 02 chishongo chakaunganidza ne inonakidza uye inosimbisa twist yakafuridzirwa nedenderedzwa theorems. Chikamu chega chega chakagadzirwa neComputer Aided Design software, yakavakwa chose kana chikamu neSarudzo Laser Kutadza kana kuti Steel 3D kudhinda tekinoroji uye ruoko rwakapedziswa nemaitiro echinyakare esira. Iko kuunganidza kunotora kufemerwa kubva muchimiro chedenderedzwa uye yakanyatsogadzirwa kugadzirira kuona Euclidean theorems mune mapatani uye mafomu eanogona kupfekedzwa, achiratidza, nenzira iyi kutanga kutsva; pekutangira kune ramangwana rinonakidza.
Muvhuro 3 Ndira 2022
Jira Rudo uye kuita zvinhu zvakawanda. Nhau yakajeka yakarongedzwa mumucheka, kugadzirisa uye pfungwa yeiyi trench'coat, pamwe chete nedzimwe dzimwe nguo dzeunganidzwa. Kusiyana kwechinhu ichi ndechechokwadi dhizaini dhizaini, minimalistic kubata, asi chii chinonyanya kushamisa apa, zvinogona kunge zviri kuita kwavo kwakasiyana-siyana. Ingovhara maziso ako, ndapota. Chekutanga, iwe unofanirwa kuona munhu ari serious ari kuenda kwaari serious..blue basa. Zvino, dzungudza musoro wako, uye pamberi pako uchaona jira rakanyorwa reblue trench, uine mamwe mafungiro emagineti pazviri. Yakanyorwa neruoko. Nerudo, Reprobable!
The Curtain Hofisi Yekutengesa China 20 Ndira
Stocker Chair Chitatu 19 Ndira
Reflexio Typography Chirongwa Chipiri 18 Ndira
Rin'i Mhete Uye Pendant Mutsipa Silk Foulard Zvishongo Zvekushongedza Jira